Hiran State - News: Doorashadii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka oo dhaceysa waqtigii loogu talo galay.
Doorashadii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka oo dhaceysa waqtigii loogu talo galay.
Kenya:(hiranstate.com)- Qaramada midoobay ayaa wado qorshe lagu xaqiijinayo in doorashada madaxweynaha Somaliya iyo gduoomiyahaba dhaceyso mudadii loogu talo galay xitaa hadey ka dhega adeygaan madaxweynah iminka jira iyo xukuamda Farmaajo.
Dhinaca kale waxaa jira qore cusub oo aan la dheyelsan karin kaasi oo ay qaramada midoobay ku dooneyso iney xoojiso maamul goboleedyada shirna lagu qabto gudaha wadanka iyadoo goobta uu ka dhacayo la weydiinayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo dowlada ku meel gaarka ah oo iyadu aanba hada waxba diidi karin maadama gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya iyo qaramada midoobay ay la wada shaqeynayaan hogaamiyayaasha maamul goboleedyada.
Arinta kale ee qatarteeda leh waxey tahay qaramada midoobay waxey dooneysaa iney xiriir hoose la yeelato oo aykasbato qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyadoo dhawaantan adkaan doonto in TFGdu hanato galsooni badan oo hada ay isku haleyneyso oo maamulada qaarkood ah.
Xog rasmi ah oo la helayo ayaa sheegeyso in gobolada Bay iyo Bakool iyaguna ku dhawaaqi doonaan maamul iyaga u gaar ah kedibna ay si sahlan iskugu ximayaan maamulada dlaka ka curtay iyo siyaasada qaramada midoobay.
· admin on April 16 2011 20:06:37 · 0 Comments · 1642 Reads ·
14,569,369 unique visits